Ukunika Amandla Ukuthengisa: Ukuvala Igebe Phakathi Kokuthengisa Nokumaketha
NgoMsombuluko, Mashi 4, 2013 NgoLwesibili, ngo-Mashi 5, i-2013 UJenn Lisak Golding
Isihloko se- kushintsha ifanele yokuthengisa kusengqondweni yazo zonke izinkampani. Ingxenye enkulu yoshintsho yindlela esibheka ngayo ukuthengisa, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi isu lokuthengisa nokumaketha lihambisana kanjani kunakuqala. Izinhlangano kudingeka zihlaziye ukuthi inhlangano yazo ikufinyelela kanjani ukuthengisa ngokungaguquguquki ukuze zingalahlekelwa yimaphi amathuba. Ngabe izinguquko zakho ezisuka ekumaketheni ziye ekuthengisweni azinamsindo? Ngabe unikezela ngolwazi olwanele kuzona zombili izinhlangothi? Ngabe ukhomba amathemba afanele? Le yimibuzo okufanele uyibuze njalo.
Amandla okuthengisa, ngombono wami, aletha amaqembu womabili (ukuthengisa nokumaketha) ndawonye. Kwakha ubudlelwano bokufanelana, lapho impumelelo eyodwa incike kokunye futhi okuphambene nalokho. Ngenxa yalokhu, la maqembu ayahlangana futhi aqala ukugeleza komsebenzi okuzokwenza kube lula ukukhishwa kwezandla nokugcina amakhasimende.
Amakhasimende ethu eTinderBox asebenze nezinhlangano ezahlukahlukene ngokunikeza amaklayenti nge isoftware yokulawulwa kwesiphakamiso sokuthengisa. Iziphakamiso zokuthengisa ziyingxenye ebalulekile yenqubo yokuthengisa, kodwa futhi ziyabona ukuthi ukuxhumana ngaphambi kokuba umthengisi afike esigabeni sesiphakamiso kubeka ithoni ebudlelwaneni obuya phambili. Ukulalela ngempela amakhasimende nokuqoqa idatha kusuka kwezokumaketha kuzokusiza ungagcini ngokufinyelela esinyathelweni sesiphakamiso, kepha kuzokusiza ukuthi wakhe isiphakamiso semithombo yezindaba esinothile esikhanga kulokho okudingwa yilelo themba nezidingo.
Sisebenze nethimba kwaTinderBox ukwenza ucwaningo oluzungeze amandla okuthengisa nokuthi ukuvela kwawo kuwushintsha kanjani umdlalo. Ingabe uzwa ezinye zalezi zinhlungu zokuthengisa? Yiziphi izinguquko ozenzayo enhlanganweni yakho ukuqondanisa ukuthengisa nokumaketha?
Tags: ukukhulumisanamarketingUkunika Amandla UkuthengisaIziphakamiso Zokuthengisa